wedzera printer pfupi windows 10
Iyo Printer folda inosvikika nekufamba kuenda ku Control Panel uye wobva wavhura maDivices nePrinta folda. Iyo Prinda folda inoratidza zvese zvakadhindwa zvakadhindwa paPC yako uye inobvumidza iwe kuwana akasiyana printer marongero.
Kana iwe kazhinji uchifanira kuvhura iyo Prinda folda kuti uchinje printer marongero, unogona kugadzira desktop yedhirowa kwairi kana kuiisa paseji yebasa. Muchirongwa ichi, tichaona nzira yekugadzira dhiraivha yedhiramu pane Printer folda, uye mapinicha ePrinter folda kune iro basa.
Gadzira dhizaini yedhirowa yePrinta Printa mukati Windows 10
Zadzisa raira dzakapihwa kuti ugadzire iyo desktop dhiraivha kune maPrinta folda mukati Windows 10.
Step 1: Kungofa panzvimbo isina chinhu pane desktop, tinya New uye ipapo chengeta yokudimbudzira kuvhura Gadzira mupfupi wizard.
Step 2: Mundima yenzvimbo, nyora nzira inotevera:
Click Next bhatani.
Step 3: Zvino, isa zita reshoko pfupi. Tinozvidana sezita Printers sejira pfupi iri redhinda dzevanyori.
Step 4: Pakupedzisira, chengetedza pedza bhatani kugadzira iyo Printer's folda pfupi pane desktop uye kuvhara wizard.
Iwe unogona ikozvino kudzvanya pane itsva Printer's folda pfupi pane desktop kuti uvhure maPrinta folda. Sezvauri kuona, iyo nzira pfupi haina chiratidzo chakakodzera. Saka, ngatichinjei icon zvekare.
Step 5: Kungofa pane itsva Printer folda pfupiso pane desktop uye tinya Properties kuti uzarure zvayo.
Step 6: pasi yokudimbudzira tab, kanda Shanduko Icon bhatani. Kudzvanya Shandura Icon bhatani kunozarudza dialog itsva. Pano, mhanyisa % SystemRoot% System32SHELL32.dll mumunda uye sarudza chiratidzo cheprinta.
Click OK uye ipapo chengeta Shandisa bhatani. Ndizvo! Iye zvino wawedzera printer icon kuPrinta purinda pfupi pane desktop yako.
Pinda maPrinter folda kune rimwe rebhavhu mukati Windows 10
Step 1: Tevedza rairo dzakapihwa pamusoro kuti ugadzire Printer folda pfupi pane desktop.
Step 2: Dhonza uye udonhedze Printer folda pfupi nzira kune yebasa nzvimbo kunamatira kune yebasa rebasa.